Shan waxyaabood oo laga bartay barbarihii kooxaha PSG iyo Man City ee Champions League – Gool FM
(Paris) 07 Abriil 2016 – Kooxda kubadda cagta Man City ayaa xalay barbaro 2-2 kala soo kulantay PSG oo ay booqatay lugta hore ee siddeed dhammaadka Champions League.
Ciyaartii ka dhacday garoonka Parc des Princes ayaa kooxaha PSG iyo Man City waxa ay ku kala tageen barbaro 2-2, waxaana PSG labada gool u kala dhaliyey Ibrahimovic 41’daqiiqo iyo Rabiot 59’daqiiqo, halka Man City ay labada gool kala kala heshay De Bruyne 38’daqiiqo iyo Fernandinho 72’daqiiqo, inkastoo Ibra uu rigoore ka khasaariyey PSG.
>- Hart ayaa bad baadiyey saddex ka mid ah shan gool ku laad oo uu wajahay tan iyo markii ugu horreysay ee uu safto Champions League taas oo ka dhigan 60% – waana cadadka ugu badan, shan rigoore ayaa lagu tuuray tan iyo xilli ciyaareedkii 2011-12.
>- Zlatan Ibrahimovic ayaa dhaliyey shan gool oo xiriir ah kulamada Champions League markiisii saddexaad ee xirfaddiisa ciyaareed, horay waxa uu sidaan oo kale u sameeyey bishii February sanadkii 2012-kii isagoo ka tirsan Milan iyo bishii February sanadkii 2014-kii isagoo matalayey kooxda PSG oo haatan ka tirsan yahay.
>- David Luiz ayaa kaarka digiinta ah la siiyey ciyaarta oo soconaysa 12-ilbiriqsi, waa jaalihii ugu dhaqsiyaha badnaa Champions League xilli ciyaareedkan iyo kii ugu dhaqsiyaha badnaa ee la bixiyo tartankan tan iyo xilli ciyaareedkii 2003/04.
>- Zlatan Ibrahimovic ayaa haatan dhaliyay 39 gool 42 kulan oo uu ciyaaray tartamada oo dhan xilli ciyaareedkan.
>- Kevin De Bruyne ayaa saddex kulan oo xiriir ah gool u dhaliyey Man city waana kulamadii ay la kala ciyaareen kooxaha Everton, Bournemouth iyo PSG.
Blanc: Manchester City ayaa aad uga awood badan Chelsea